Ma ogeyd inaad caqli gal noqon laheyd adoon gubin laambada habeenkii? Haddii uu jiray budo kaa caawin kara hagaajinta xusuustaada ama kordhinta soo jeedintaada, miyaad qaadan lahayd?
Maanta, mukhaadaraad ah, sidoo kale loo yaqaan nootropics, waxay noqonayaan gacaliso dad badan. Sababta tani waxay tahay iyaga oo lagu yaqaan inay ka wanaagsan yihiin nolol maalmeedka qofka. Faa'iidooyinka nootropic waxay u dhexeeyaan feejignaan dheeri ah oo dheereyn ah, feejignaan dheeri ah, diirad saarid badan iyo sidoo kale maskax feejigan.
Waxaad ogaan doontaa inay jiraan arday aan ku fiicnayn xusuusinta oo doonaya inay dib u dhigaan imtixaankooda iyaga oo aan halgan badan dhicin. Sidoo kale, waxaa jira dad leh shaqooyin heer-sare ah oo leh saamiyo sareeya kuwaas oo doonaya inay sii wadaan u-soo-jeedka sare maalinta oo dhan.
Dhankaas, dadka qaar ayaa adeegsada nootropics iyo budada smart smart si loo maareeyo cilladaha mootada sida Alzheimers, cudurka Hunnington, Parkinson, iyo ADHD. Waa sababahaas awgood oo aad uga fiirsan karto adeegsiga nootropics si aad uga sii horreyso inta kale.
Qaybtan, waxaan soo gaabinay 15ka kore budada nootropic iyo waxa iyaga ka dhigaya inay bannaanaadaan.
Fahmitaanka noocyada kala duwan ee nootropics
Xilliyadii la soo dhaafay, warshadaha dawooyinka caqliga leh ayaa koray, iyadoo nootropics-ka badan la helli karo sidii hore. Halkan waxaa ah lixda qaybood oo nootropics loo kala saari karo;
Kuwani waa qaar ka mid ah kobcinta garashada si ballaaran loo isticmaalo ee lagu iibiyo miiska. Waxa iyaga ku wanaagsan waa xaqiiqda ah inay sare u qaadaan shaqada garashada qofka iyagoon u dhaqmin sida kicinta ama dawada. In kasta oo saynisyahannadu aan weli si buuxda u fahmin farsamadooda waxqabadka, haddana waxaa la sheegayaa inay kordhiyaan qulqulka dhiigga iyo isticmaalka oksijiinta waa qaybo ka mid ah maskaxda.
Nasiib wanaagse, si fudud ayaa loo heli karaa maadaama aad si deg deg ah uga heli karto khadka tooska ah. Sidoo kale, kiisas aad u yar oo waxyeelooyin ayaa la soo sheegay ilaa hadda.
Badanaa, inta badan daawooyinka ku jira fasalkan si wanaagsan ayey u shaqeeyaan marka la isticmaalo muddo dheer. Taasi waxay ka dhigan tahay inaad ku raaxeysato faa'iidooyinka ugu sarreeya, waa inaad u isticmaashaa dhowr toddobaad.
Nootropics Dabiiciga ah
Wax nootropic ah oo loo arko inay yihiin geedo, dabiici, ama dabiici ah ayaa iska leh fasalkan. Badanaa, badanaa waxay ku saleysan yihiin geedo waxayna bixiyaan faa'iidooyin dabiici ah. Noocyada daawooyinkaan ayaa si joogto ah loo doorbidaa sababta oo ah waxay ku badbaado yihiin isticmaalka sababta oo ah ma ku jiraan xeryahooda aan dabiici ahayn ama kiimikada.
Mid ka mid ah cilladyada ugu waaweyni waa inaysan xerin feer marka loo eego nootropics synthetic. Mid ka mid ah, sidaas darteed, wuxuu u baahan yahay inuu qaato qiyaaso aad u sarreeya si uu u helo saameyn la mid ah tan kuwa isku-dar ah.
Waxyaabaha laga helo fitamiin B
Sida magacu tilmaamayo, soosaarayaasha Vitamin B waa nootropics laga soo qaatay Fiitamiinada B si loo soo saaro faa'iidooyinka ugu fiican. Waxay saameyn ku yeeshaan glutamate, choline, iyo heerarka dopamine-ka maskaxda, tanina waxay ka dhigeysaa mid waxtar leh daaweynta daaweynta ciladaha garashada sida ADHD.
Ugu dambeyntiina, soosaarayaashaan waxaa loo isticmaalaa daaweynta daalka jirka iyo maskaxda iyo sidoo kale horumarinta horumarka xusuusta.
Waxaad u badan tahay inaad wax ka baratay peptides-kii hore. Waxay si dabiici ah u dhacaan moleculaloolaji abuur ahaaneed oo ka sameysan amino acids taas oo ay ku xiran yihiin xirmo kiimiko ah. In kasta oo aan si fudud loo heli karin, Noopept waxaa laga heli karaa internetka iyo dukaamada. Peptides-ku waa xoog badan yihiin waxayna muujiyeen inay horumarinayaan dhiirigelinta, xusuusta, tamar maskaxeed, awooda waxbarasho, iyo feejignaanta.
Choline si dabiici ah ayaa looga helaa jirka, laakiin waxaan mararka qaar u xanuunsan karnaa yaraanta. Sidaas awgeed, tani waxay horseedaysaa hoos udhaca awooda garashada taas oo yareynaysa wanaagga guud ee maskaxda. Qaadashada choline nootropics waxay gacan ka geysaneysaa kordhinta wax soo saarka maskaxda ee acetylcholine neurotransmitters.
Kaabista Choline-ka ayaa midkood lagu qaadan karaa iskiis ama waxaa lala qaadan karaa cunsuriyada. Markii la wada xiro, waxay horseed u yihiin in la kordhiyo xusuusta, awooda waxbarasho, iyo hormarinta niyadda guud.
Ampakinesku waa qaar ka mid ah nootropics-ka ugu awoodda badan ee dhowaan la soo saaray. Waxay ka shaqeeyaan dhiirigelinta dadka qaata glutamate-ka maskaxda. Natiijo ahaan, waxay u horseedaan heerar kordhay oo ah 'glutamate', taas oo iyaduna hagaajinaysa barashada iyo xusuusta.
Budada nootropic guud ahaan ugu fiican: Nootropic-ka ugu fiican ee loogu talagalay hagaajinta xusuusta: Nootropic-ga ugu fiican waxqabadka cayaaraha:
Purity P98% budada Flmodafinil
Daahir '98% Poolder Pramiracetam
Purity≥98% budada Carphedon
Sababta aan ugu sameynay:
Waa mid wax ku ool ah xitaa goos goosad yar.
Dhibaatooyin yar yar.
Waxaad dareemi doontaa saameyntooda soddon daqiiqo gudahood markaad qaadatid.
Waxay horseed u tahay heerar kor u kaca oo xusuusinta iyadoo la kaalmaynayo samaynta xusuusta muddada-dheer
Midna kama dhigeyso mid ka mid ah dhibaatooyinka soo raaca. taasoo ah, saamaynta cudurka yuphoric
Wuxuu ku garaacaa 1-2 saacadood gudahood markii la qaato
Waxay bixisaa saameyn dhiirrigelin leh
Si dhakhso ah ayaa loo nuugo jirka
Heerarka ugu sarreeya ayaa lagu gaadhay saacad gudahooda laga bilaabo codsashadiisa.
Halkan waxaa ah 15ka ugu sarreeya ee Nootropics budada Daroogada:
Guud ahaan ugu fiican ee loo yaqaan 'nootropic budada-Flmodafinil budada
Nootropic-ka ugu fiican ee loogu talagalay hagaajinta xusuusta-Pramiracetam
Nootropic ugu fiican ee loogu talagalay waxqabadka cayaaraha-Carphedon budada
Nootropic-ka ugu fiican ee hurdada- Adrafinil Powder
Kormeeraha ugu fiican ee Sirdoonka- Fladrafinil (CRL-40,941) Powder
Dhiirrigeliyaha ugu wanaagsan ee dhiirrigelinta- Hydrafinil (9-Fluorenol) Powder
Ugu dhaqsaha badan nootropic- Noopept (GVS-111) Powder
Nootropic-ka ugu fiican ee loo yaqaan 'neuroprotection-Nefiracetam Powder'
Kor u qaadista maskaxda - budada Aniracetam
Nootropic-ka ugu fiican ee daaweynta cudurka Alzheimer-J-147 Powder
Daweynta ugu fiican ee loo yaqaan 'antiototot--magnesium L-Threonate Powder'
Nootropic-ka ugu fiican ee lagu dardar galiyo shaqada wadnaha- Nikotinamide Riboside Chloride budada
Nootropic ugu fiican daaweynta sonkorowga-Galantamine Hydrobromide budada
Nootropic-ka ugu fiican ee lagula dagaallamo kansarka afka ilmo-galeenka - budada 7P
Qalabka ugu fiican ee glutathione - N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester powder
Isbarbar dhig 15-ka ugu wanaagsan ee budada ah ee budada ah ee loo yaqaan 'nootropic budo' 2019
MAGACA RATING QAAR KA MID AH DHAQANKA talinayaa Xisaab HALF-NOLOSH
Budada Flmodafinil 5 Aad u yar 100-200mg maalintii saacadood 12-15
Budada Pramiracetam 5 Aad u yar 600-1200mg maalintii saacadood 5-6
Budada Carphedon 5 Tiro yar 200-750mg maalintii saacadood 3-5
Adrafinil budada 4.5 Tiro yar 600-900mg maalintii saacadood 12-15
Budada Fladrafinil 5 Waxyeelooyinka yar ama yar 100-200mg maalintii saacadood 6-7
Budada Hydrafinil 4.5 Tiro yar 50-150mg maalintii saacadood 6-8
Nooc-soo-saarkii Noopept 5 Tiro yar 30-60mg maalintii saacadood 3-6
Budada Nefiracetam 4.5 Aad u yar 600-900mg halkii saacadood 3-5
Budada Aniracetam 5 Tiro yar 1500mg saacadood 1-2.5
J-147 budada 5 Dhowr 20-30mg saacadood 1.5-2.5
Budada Magnesium L-Threonate 5 Tiro yar 1500-2000mg saacadood 44
Budada Nikotinamide Riboside Chloride 4.5 Aad u yar 1000-2000mg saacadood 5.3
Galantamine Hydrobromide budada 4 dhowr 4-8mg saacadood 7
Budada 7P 5 Tiro yar 5000mg saacadood 1-2
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester budada 4.5 Tiro yar 5000mg saacadood 5.6
Budada nootropic guud ahaan ugu fiican
1. Nadaafad98% Flmodafinil (CRL-40,940) budada 90280-13-0
Qofka raadinaya nootropic wax ku ool ah oo aan wax badan ku shubin nidaamka, markaa budada Flmodafinil ayaa ah heshiiska dhabta ah. Waa farxad in la isticmaalo maadaama qiyaasta loo yaqaan 'Flmodafinil dose' loo baahan yahay 100-200mg laba jeer maalintii. Laga soo bilaabo dib-u-fiirinta Flmodafinil ee ay bixiyeen isticmaaleyaashu, waxaa iska cad in nootropickan uu kaa dhigayo inaad dareento oo aad u fekerto sidii madax adigoo kaliya qadar yar ka qaadanaya.
Waxay xaqiijisay inay kordhiso awooda garashada qofka iyo wax soo saarkooda iyadoo la kordhinayo xaddiga histamine, orexin, glutamate, iyo heerarka norepinephrine. Waxa kale oo taas ka mid ah waxay sidoo kale u shaqeysaa iyada oo xaddidaysa burburka dopamine ee jirka ka jira.
In kasta oo ay tahay midka ugu cusub ee suuqa, waa kan ugu fiican budada nootropics sababtuna tahay faa iidooyinka ay miiska keento. Mid ka mid ah waa korodhka qofka wax barashadiisa iyo xusuusta kartidiisa.
Marka labaad, waxay ka caawineysaa daaweynta murugada yar iyada oo loo marayo soo celinta qofka xaaladdiisa caadiga ah. Waxay kaloo caawisaa maamulka ADHD iyo shuruudo kale oo laxiriira dareenka. Intaa waxaa sii dheer, Flmodafinil waxaa loo yaqaanaa inuu kordhiyo baraaruga, wanaajiyo dhiirrigelinta, iyo diiradda, iyo xitaa qof ka wanaagsan waxqabadka maskaxdiisa.
Marka la isbarbardhigayo Flmodafinil iyo modafinil, astaamo dhowr ah oo tirin kara, tusaale ahaan, waxyeelada Flmodafinil ayaa aad u yar marka la barbar dhigo kuwa modafinil. In kasta oo ay umuuqdaan inay lamid yihiin, qaaciddadooda qaab dhismeedku aad ayey u kala duwan tahay, tanina waxay Flmodafinil ka dhigaysaa mid si dabiici ah loo heli karo.
Marka laga hadlayo sharciga Flmodafinil, waxay kuxirantahay wadanka aad ka timid. Tusaale ahaan, inaad u soo iibsato budada Flmodafinil gudaha Kanada, uma baahnid warqad dhakhtar, halka aad ugu baahan tahay adigu inaad ku iibsato Flmodafinil Yurub.
Haddii aad ka warwarsan tahay halka aad ka iibsanaysid budada Flmodafinil, markaa waa inaadan sii eegin. Waxaad dooran kartaa inaad ku iibsato Flmodafinil khadka tooska ah sida ugu habboon uguna fudud xulasho ahaan. Waxaan nahay isha sharciyeynta budada nootropic halka aad ka iibsan karto CRL-40,940 budada Flmodafinil.
Waxay u shaqaysaa iyada oo wax laga beddelayo maadada 'histamine', 'orexin', dopamine ',' glutamate ', iyo heerarka norepinephrine.
Qiyaasta lagu taliyey waa 100-200mg maalin kasta.
Waxaa lagu tijaabiyay xoolaha.
Nootropic-ka ugu fiican ee hagaajinta xusuusta
2 Pure≥98% Pramiracetam Powder 68497-62-1
Haddii aad tahay arday wax barta oo fiirinaya inuu sameeyo imtixaanadooda ugu dambeeya ama qof sare oo raba inuu ilaaliyo arrintooda cawlan, markaa pramiracetam ayaa adiga loogu talagalay. Waa nootropic-ka ugu fiican marka ay timaado joogsashada xusuusta adag. Pramiracetam waxay ka tirsan tahay qoyska racetam-ka laakiin waxay soddon jeer ka awood badan tahay cunsuriyadda.
Budada Pramiracetam waxay u shaqeysaa iyadoo la kordhinayo heerka qaadashada choline iyo wax soo saarka Nitric oxide ee maskaxda. Waxtarka ugu weyn ee Pramiracetam waxaa ka mid ah; hagaajinta diiradda iyo ka soo kabashada dhaawac kasta oo maskaxda ah. Waxay kaloo ka caawisaa dib u noqoshada iyo ka hortagga amnesia.
Xakamaynta Pramiracetam badanaa waxay ka kooban tahay il xoqan si looga hortago hoos u dhaca heerarka acetylcholine ee maskaxda iyo hagaajinta shaqada garashada. Waxaa sidoo kale lagu dhejin karaa Adrafinil, Armodafinil, iyo Modafinil. Isbarbardhiga Pramiracetam iyo Phenylpiracetam, way cadahay in Pramiracetam uusan keenin waxyeellooyin sida xanaaq, lallabbo, iyo madax xanuun sida kan dambe.
Haddii la qorsheynayo in lagu iibsado Pramiracetam tafaariiqda ama budada weyn, markaa had iyo jeer waad nagu xisaabtami kartaa.
Waxay leedahay bilow deg deg ah oo ficil.
Waxay bixisaa kicinta nafsiga ah iyada oo aan horseedin bara kicinta.
Muddada daaweynta ayaa gaaban.
Waa dufano-macaan sidaa daraadeed waxa fiican in lala qaato cuntada.
Nootropic ugu fiican waxqabadka ciyaaraha fudud
Carphedon waa wax soosaara piracetam ah oo kaliya farqiga jir ahaaneed ee piracetam uu yahay kooxda phenyl ee ku xiran. Kooxdan darteed, qiyaasta budada phenylpiracetam ee loo baahan yahay inay bixiso saameyn isku mid ah sida Piracetam ayaa ka hooseeya waxaana loo tixgeliyaa inay 20-60 jeer ka awood badan tahay Piracetam.
Inta badan dib u eegista Phenylpiracetam waxay ku faantaa waxtarnimadeeda si loo xoojiyo waxqabadka cayaaraha sababtoo ah saameynta kicinta ee ay bixiso. Waxay kaloo ka caawisaa dadka inay iska celiyaan dhaxanta. Faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah maaraynta suuxdinta, istaroogga, cilladaha xusuusta, iyo daalka.
Phenylpiracetam lama qaadan karo waqtiga jiifka maadaama ay u horseedi karto jahwareer dhanka hurdada ah. Sidoo kale, waa inaad ku qaadataa laba ilaa afar jeer usbuucii ama wareegyo si aad uga hortagto jirka inuu u dulqaato saameynta kicinta.
Nootropic-ka ugu fiican ee baraaruga
Haddii ujeeddadaadu tahay inaad kordhiso feejignaanta iyo yareynta hurdada, markaa waa inaad tixgelisaa qaadashada budada adrafinil. Aqlabiyadda dib u eegista Adrafinil waxay muujineysaa inay gacan ka geysaneyso sidii qofku u soo jeedan lahaa muddo dheer. Marka laga hadlayo Adrafinil vs. Noda-badhka Modafinil, kan dambe wuxuu leeyahay mid dheer. Adrafinil si kastaba ha noqotee wuxuu u beddelaa modafinil inta uu ku jiro jirka isagoo ku daraya nus-nuskiisa sidaas darteed saameyno muddo dheer soconaya.
Saamaynta kale ee Adrafinil waxaa ka mid ah kordhinta diiradda; wanaajinta awooda barashada qofka iyo taageerida xusuusta. In kasta oo ay sababi karto waxyeellooyin yar, haddana waxaa loo tixgeliyaa inay tahay mid kicisayaal ah oo ammaan ah maadaama aysan sababi karin inta badan dhibaatooyinka soo raaca ee aan fiicnayn ee la xiriira kiciyeyaasha.
Waxaa ugu fiican in lagu qaato biyo ama casiirka liinta sababtoo ah dhadhanka budada ah ee Adrafinil. Maaddaama ay sharci ka tahay waddamada badankood, waxaad ka iibsan kartaa budada adrafinil khadka tooska ah iyada oo aan loo baahnayn warqad dhakhtar.
Qiyaasta lagu taliyey waa qiyaastii 600-900mg.
The Saamaynta Adrafinilsoconaya 12-15 saacadood.
Waa in aan loo qaadan maalin kasta ama muddo dheer maadaama ay dhiseyso dulqaad.
Sir haynta ugu fiican
5 Nadaafad98% Fladrafinil (CRL-40,941) Budada 90212-80-9
Ma waxaad raadineysaa wax kaa caawin doona inaad sare ugu kacdo fursadaha ka baxsan wixii aad weligaa ku riyootay? Budada Fladrafinil waa daroogada ugufiican ee kordhinaysa qofka maskaxdiisa iyo kartidiisa. Waxay u shaqeysaa iyada oo ka hortageysa burburka dopamine sidaas awgeed xakamaynta jawaabaha shucuurta, barashada, iyo dareenka.
Fladrafinil wuxuu la mid yahay budada modafinil marka la eego sida ay u sameysan yihiin iyo saameyntooda iyadoo kaliya farqiga u yahay molecule dheeraad ah oo fluoride ah. Dheeraadku wuxuu ka dhigayaa Fladrafinil inuu si fudud jidhka ugu nuugo.
Dhibaatooyinka soo raaca Fladrafinil way yar yihiin, laakiin darnaanta ayaa ku sii kordhin karta isticmaalka joogtada ah. Nasiib wanaag, waa la heli karaa, waxaadna ka iibsan kartaa Fladrafinil khadka tooska ah haddii aad rabto.
The Qiyaasta Fladrafinilwaa inuu noqdaa qiyaastii 100-200 mg maalintii.
The Waxyeelooyinka Fladrafinildhacdo dhif.
Waxay 3-4 jeer ka awood badan tahay Adrafinil iyo Modafinil.
Dhiirrigelinta feejignaanta ugu wanaagsan
6 Pure≥98% Hydrafinil (9-Fluorenol) Powder 1689-64-1
Budada Hydrafinil, oo sidoo kale loo yaqaan Fluorenol waa dopamine reuptake inhibitor oo saameynteeda ugu weyni ay tahay kordhinta feejignaanta. Faa'iidooyinka kale ee Hydrafinil waxaa ka mid ah tamar maskaxeed oo kor loo qaaday, feejignaan fiican, iyo daal yaraan.
Farsamaynta Hydrafinil ee ficilku sidoo kale waxay ku lug leedahay kordhinta histamine, norepinephrine, iyo heerarka glutamate si kor loogu qaado niyadda qofka. Markaad isbarbar dhigayso Hydrafinil iyo modafinil bioavailability, Hydrafinil nootropic waxay muujisay inay leedahay mid ka gaaban.
Iibkeeda waa mid aan sharciyeysneyn markaa waxaad iibsan kartaa ceyriin Hydrafinil (9-Fluorenol) wakhti kasta oo aad rabto.
Waa mid rakhiis ah marka la barbar dhigo nootropics kale.
Hydrafinil waa mid aan yarayn sidaa darteedna jawaab-celinno aan caadi ahayn ayaa laga helayaa.
The Saamaynta Hydrafinilloo malaynayaa inay yihiin khiyaano.
Nootropic-ga ugu dhaqsaha badan
Budada Noopept waa nootropic synthetic oo si ballaaran loo qaato kaabis ahaan. Waa daroogada ugu dhaqsaha badan uguna dhaqsaha badan maaddaama ay u badan tahay inaad dareento saameynteeda daqiiqado gudahood. Haddii aad la yaaban tahay sida Noopept u shaqeeyo, markaa waan kuu sheegi doonaa sida. Farsamadeeda ficilku waxay ku lug leedahay kororka laba kiimiko maskaxeed oo muhiim ah; NGF iyo BDNF.
Faa'iidooyinka Noopept waxaa ka mid ah hagaajinta xusuusta qofka, caddayntiisa, xawaaraha fikirka, diiradda, tognaanta, iyo xamaasadda.
Saameynta kaliya ee Noopept ee la ogaan karo waa madax xanuun ka dhasha qaadashada qadar sare ama isticmaalka budada Noopept nootropic markii ugu horeysay. Faa'iidada Noopept waa in ay sharci tahay oo kaliya lagu xakameeyo dalal kooban. Taasi waxay ka dhigan tahay haddii aad u baahato inaad iibsato Noopept, waxaad u baahan tahay inaad tixgeliso sharciyada waddankaaga. Markaad sidan sameyso, waxaad ku ogaan kartaa inaad u baahan tahay dawo qoris iyo in kale.
The Qiyaasta Noopeptwaa 30-60 mg maalintii.
Waa wax loo dulqaadan karo oo ay la imaan karto waxyeelo yar.
Waxay kuxirantahay choline.
Nootropic-ka ugu fiican ee loo yaqaan 'neuroprotection'
8 Pure≥98% Nefiracetam Powder 77191-36-7
Ka dib markii uu ku dhacay istaroog, bukaanno badan ayaa lagu soo waramayaa inay la kulmaan suuxdin, taas oo u horseedi karta dhaawaca maskaxda iyo sidoo kale xusuusta. Nasiib wanaagse, Nefiracetam wuxuu cadeeyay inuu kahortago qallalka. Tani waxay ku sameysaa iyada oo la xakameynayo calaamadaha NMDA ee ka hortagaya kor u kaca heerarka glutamate.
Waa mid ka mid ah xubnaha cusub ee xubnaha cunsuriyada, qaar ka mid ah faa'iidooyinka kale waxaa ka mid ah kor u qaadida niyadda, barashada, iyo xusuusta. Marka la isbarbardhigayo nefiracetam VS aniracetam, inta badan dib u eegista nefiracetam waxay soo sheegaan inay u horseedeyso horumar weyn qofka xaaladdiisa.
Dhibaatooyinka soo raaca Nefiracetam waa yar yihiin, sidaas awgeed waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo ammaan ah oo si wanaagsan loo dulqaadan karo.
Waa dawo dufan leh; sidaa darteed, qaadashada hoose waxay u egtahay inay aad waxtar u leedahay marka la barbar dhigo piracetam.
Nefiracetam wuxuu maray daraasado xayawaan ah iyo sidoo kale qaar ka mid ah daraasadaha aadanaha.
Qiyaasta daawada waa 100mg-900mg maalin kasta, laba jeer ayaa la qaataa; mid aroortii hore iyo labaad galabtii.
Kobcinta ugu wanaagsan ee maskaxda
9 Pure≥98% Aniracetam budada 72432-10-1
Budada caqliga ah ee 'aniracetam' waa 'ampakine nootropic' oo ka awood badan piracetam. Waxay qaadataa billada markay tahay kor u qaadista maskaxda waxayna ku shaqeysaa iyadoo dhiirrigelineysa soo-dhoweeyeyaasha AMPA; kaneecada guud ee CNS glutamate. Rakibayaasha AMPA waxay door muhiim ah ka ciyaaraan sameynta xusuusta iyo barashada.
Faa'iidooyinka kale ee budada Aniracetam waxaa ka mid ah kororka fal-celinta, yareynta walaaca, iyo kordhinta aragtida. Dhibaatooyinka yar ee ay keento marka la barbardhigo piracetam waxay ka dhigeysaa mid caan ah in aan la xusin natiijooyinkeeda oo aad uga xoog badan koob bun ah.
Budada Aniracetam waxay kordhisaa awooda maskaxda qofka iyadoo kordhineysa maskaxda maskaxda ka soo baxda, taas oo u shaqeysa bacriminta maskaxda.
Waa dufan aad u dufan.
The Qiyaasta Aniracetamwaa 1500mg laba jeer maalintii.
Mid ayaa dareemi kara Saamaynta Aniracetam15-20 daqiiqo markii aad qaadatay.
Nootropic-ka ugu fiican daaweynta cudurka Alzheimer
10 Pure≥98% J-147 Powder 1146963-51-0
Budada J147 waa mid nootropic ah oo la sameeyay sanadkii 2011, taasina waxay dib uga noqon kartaa xusuusta oo yaraata, oo gaabisa ama dib ugu noqota cudurka Alzheimer. Waxay ka tirsan tahay kooxda 'phenyl hydroxide' waxaana laga soo qaatay curcumin curry’s Curry qayb ka ah.
J147 wuxuu u shaqeeyaa adoo yareynaya waxqabadka isku-darka ATP ee mitochondria. Tan dhexdeeda, waxay ka ilaalisaa unugyada neerfayaasha sunta maskaxda ee la xiriirta da'da. Cilmi-baaristani waxay u noqotay horumar cilmi-baareyaasha tan iyo inta badan daawooyinka Alzheimer ay bartilmaameedsadeen astaamaha amyloid ee ku jira maskaxda bukaanka Alzheimers. Dawooyinka Alzheimers wax badan ma tarin ka dib.
Waxaa jiray tijaabooyin caafimaad oo baahsan oo J147 ah, waxayna ilaa iyo haatan muujisay inay waxtar leedahay oo loo arko inay xasilloon tahay. Natiijooyinka tijaabada ah ee tijaabada ah ee J147, waxaa iska cad in J147 ay gacan ka geysan karto daaweynta cudurka Parkinson iyo stroke.
J147 waxay ka caawisaa daaweynta cudurada neerfaha.
Waa daawo tijaabo ah oo leh guryaha ka hortagga gabowga.
J147 wuxuu u shaqeeyaa isagoo ku xidhanaya borotiin laga helay mitochondria (unugyada ka caawiya jiilka tamar).
Daawaynta antiotototic-ga ugu fiican
11 Nadaafad98% Magnesium L-Threonate Powder 778571-57-6
Weligaa ma u maleyneysay in awooddaada garasho ay ku sii jiri karto xitaa da'da? Budada Magnesium L-Threonate waa cusbo L-threonic acid magnesium u gaar ah oo dib u buuxisa magnesium maskaxda qofka, taasoo ka dhigaysa inay si wax ku ool ah u shaqeyso. Waa mid ka mid ah qaababka ugu badan ee laga heli karo suuqa magnesium-ka.
Magnesium L-Threonate budada nootropic wuxuu shaqeeyaa iyadoo la kordhinayo cufnaanta synaptic ee agagaarka gobolka hippocampus ee laga helo maskaxda. Marka sidaas la sameeyo, waxay dhiirrigelisaa xusuus dheer, mid gaaban, iyo mid shaqo oo ku dhex jirta dhallinyarada iyo waayeelka
Waxay kaloo kordhisaa qofku magnesium-ka jidhkiisa iyo waliba garashadooda.
Qiyaasta ugu habboon ee Magnesium L-Threonate qiyaasta waa 1500-2000mg
Waxay kaa caawineysaa hagaajinta xusuusta, dhimista xusuusta da 'awgeed, iyo waxay kaloo ka caawineysaa abuuridda dariiqooyin cusub.
Magnesium L-Threonate waxaa markii ugu horreysay abuuray cilmi baarayaal ka tirsan MIT kuwaasoo ku daray abaalmarinta Nobel Prize.
Nootropic ugu fiican ee lagu dardar galinayo shaqada wadnaha
12 Purity≥98% Nikotinamide Riboside Chloride budada 23111-00-4
Budada Nicotinamide riboside Chloride waa midka ugu cusub nicotinamide adenine dinucleotide ee suuqa, taas oo ah horudhac fitamiin ah. Faa'iidada leh waa in si fudud loogu beddelo NAD + hal mar jirka marka la barbardhigo kuwa kale ee NAD +.
Budada weyn ee loo yaqaan 'Nicotinamide riboside Chloride bulk' waxay hoos u dhigtaa halista ka timaadda cudurka wadnaha iyadoo si weyn looga beddelayo da'da la xiriirta xididdadaada. Adoo kor u qaadaya heerarka NAD +, waxaa jira hoos u dhac ku yimaada dhumucda, adkaanta taas oo iyaduna ku dareysa dabacsanaanta.
Faa'iidooyinka kale ee loo yaqaan 'Nicotinamide riboside Chloride' waxaa ka mid ah ka caawinta miisaanka oo yaraada, yareynta halista kansarka, ka caawinta daweynta jet lag, iyo ka caawinta dhiirrigelinta gabowga muruqyada caafimaadka qaba.
Dhibaatooyinka soo raaca waa kuwa aan yareyn, laakiin dar dar darrida ayaa ku kordheysa qiyaasta sare.
Waxay sare u qaadeysaa heerka NAD dhiigga illaa 2.7 jeer.
Qiyaasta ugu fiican ee loo yaqaan 'Nikotinamide riboside Chloride qiyaasta' waa 1000-2000mg maalin kasta.
Waa amaan iyada oo ay aad u yar tahay waxyeellooyinka loo yaqaan 'Nicotinamide riboside Chloride' ka dib markii la soo sheegay.
Nootropic ugu fiican daaweynta sonkorowga
13 Pure≥98% Galantamine Hydrobromide budada 69353-21-5
Maanta, sonkorowgu waa mid ka mid ah xaaladaha ugu horreeya ee ay dadku ku dhacaan adduunka oo dhan. Nasiib wanaagse, isku-dhafkan nitrogen-ka ka kooban ayaa caddeeyay inuu gacan ka geysanayo maaraynta cudurka. Tani waxay ku sameysaa iyada oo la wanaajiyo dariiqooyinka calaamadaha insulin-ta. Galantamine Hydromide sidoo kale waxay yareysaa buurnida iyadoo hoos loo dhigo caabuqa, caabbinta insulin, culeyska jirka, iyo heerarka kalastarolka.
Waagii hore, waxaa loo adeegsaday daweynta daciifnimada muruqyada iyo dareenka, iyo cillad wadida oo ay keento ciladaha habdhiska neerfaha.
Isticmaalka kale ee loo yaqaan 'Galantamine Hydromide' waxaa ka mid ah kor u qaadista shaqada garashada, yareynta xanuunka arthritic, iyo hagaajinta astaamaha carruurta autistic iyo cudurka Alzheimers.
Waxaa laga helaa ubaxyada iyo nalalka kuleylka barafka ee Caucasian, Daffodil, ubax casaan caaro ah, Garanthus woronowii, iyo barafka Voronov.
Galantamine Hydromide si fiican ayaa loo nuugo, isagoo leh bioav adị afka ah 90%.
Waxay gacan ka geysaneysaa maaraynta cudurada deg degga ah sida Alzheimer iyadoo kor loo qaadayo xusuusta qofka, feejignaanta, iyo awooda waxqabadka maalinlaha.
Nootropic-ka ugu fiican ee lagula dagaallamo kansarka xubinta taranka dumarka
14 Pure≥98% Isugeynta 7P budada 1890208-58-8
Isku-darka budada 7P waa budo cad oo aan caddaan ahayn oo loo abuuray mid ka mid ah taxaddooyin taxane ah oo leh ujeedo ah in lagu aqoonsado laba-qabatimeyaasha laba-qaboojiyeyaasha kahortaga. Nooca nootropics ee 7P budada ayaa kicisa koritaanka farqiga-43 axon wanaagsan oo horseedaya kicinta axon dib u soo noolaanshaha vivo.
Xarunta 7P ayaa soo bandhigtay waxqabadka ugu sarreeya ee lagula dagaallamayo burooyinka afka ilmagaleenka iyadoo la hagaajinayo kaabayaasha hab ku-tiirsanaan ah.
Qaar ka mid ah dheefaha budada 7P waxaa ka mid ah; kororka iskuduwida, daaweynta dhaawaca maskaxda ee la xiriira aalkolada, iyo ka hortagga sunta qiirta maskaxda. Waxay kaloo gacan ka geysataa hagaajinta niyadda qofka iyo la dagaallanka daalka.
Waxyar ayaa lagu milmaa biyaha iyo ethanol.
Qiyaasta daawada 7P ee lagu taliyey waa inay noqotaa 5000mg.
Waxay qaadataa hal ilaa laba saacadood in la buufiyo.
Kordhinta ugu fiican ee 'glutathione'
15 Pure≥98% N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester budada 59587-09-6
N-Acetyl-L-cysteine ​​ethyl ester (NACET) waa qaabka ester ee N-acetylcysteine ​​(NAC) taas oo esterification-ku gacan ka geysto kororka lipophilicity-ka NAC oo markaa ku sii fiicnaanaya daawada daawooyinka. Astaantani waxay sii kordhineysaa nuugitaankeeda sare halkaasoo ay ku xannibmayso unugyada taasoo u horseedaysa isbeddelkeeda cysteine ​​iyo NAC.
Waa hordhaca GSH oo leh bioavailability afka ah oo aad u sarreeya. NACET waxay ku shaqeysaa iyagoo u beddelaya NAC wakiil mucolytic ah, oo ah antioxidant-ga GSH-ga, iyo kahortaga paracetamol-ka.
Si joogta ah ugu milma biyaha iyo mileyaasha dabiiciga ah.
Si dhakhso ah ayey u galaan unugyada kadib maamulka.
NACETwaxay ka caawisaa maaraynta cudurada degenaanshaha sida cudurka Alzheimers.
Waxa ay tahay in la tixgeliyo ka hor intaadan iibsan nootropics
Xulashada nootropic sax ah waxay u baahan tahay xoogaa baaritaan ah, laakiin way u qalantaa maadaama ay kuu damaanad qaaday natiijooyinka aad raadineysay. Waa kuwan qaar ka mid ah waxyaabaha maskaxda lagu hayo intaad raadineysid nootropic;
Qaadashada nootropic hal mar maalintii oo iska iloobaan waa waxa dadka intooda badani ay doorbidi lahaayeen inay u socdaan. Laakiin dareenka dhabta ah, helitaanka nootropic aad u fiican oo ka shaqeeya kala-sooca qiyaasta noocan oo kale ah way adag tahay. U tag kuwa loo qaadan karo laba jeer ama saddex jeer maalintii si jirkaagu u barto qiyaasta daawada si wanaagsan loo qorsheeyay maalinta oo dhan marka loo eego hal qaadasho shoog.
Ma dooneysid inaad iibsato nootropics-ka miisaaniyadaada ka baxsan. Adiga, si kastaba ha noqotee, waa inaad tixgelisaa in dhammaantood ay kala duwan yihiin oo hababka wax soo saarkooda ay yihiin kuwo aan laga fiirsan karin marka loo eego qiimaha. Sidoo kale ma rajeynaysid inaad iibsato qiyaaso sare oo nootropics ah oo ay kujiraan waxyaabo tayo fiican leh oo ku fadhiya qiimaha lawska. Marka kahor intaadan u xalin midka ugu jaban, hubi inaad hubiso bal inay shaqo fiican tahay. Taasi micnaheedu maaha, si kastaba ha noqotee, micnaheedu maaha inaad bixisay lacag bixinta nootropics-kaaga; u tag waxa ku habboon jeebkaaga.
Nootropic kasta wuxuu leeyahay saameynta ay keento. Haddii aad rabto mid kordhin kara diiraddaada, waxaa jira mid taas. Dhanka kale, hadaad higsaneyso inaad xakameyso cudurka Alzheimer, markaa waa inaad raadsataa midka ugu fiican taas.
Sidoo kale, qaar ayaa sababi kara waxyeelo badan marka loo barbar dhigo kuwa kale. Qofna ma doonayo inuu si wanaagsan wax ugu qabto dugsiga kaliya inuu ku dhammaado inuu ku xumaado beerka. Ka dib oo dhan, caafimaadkaagu marka hore ayuu yimaadaa, oo ma aad doonaysid inaad qaadato wax dhici kara oo waxyeello kuu geysan kara.
Mararka qaarkood, mid ayaa laga yaabaa inuu rabo inuu isku daro laba ama ka badan nootropics si aad u hesho raadad garasho oo wanaagsan. Adigu, si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa in dhammaan nootropics -ku aysan ammaan ahayn marka la is -dulsaaro. In kasta oo xidhmooyinka la og yahay in ay kordhiyaan awoodda iyo in ay yareeyaan waxyeellooyinka, qaar baa laga yaabaa in aanay ammaan kuu ahayn. Sidaa darteed, waa inaad ogaataa waxyaabaha ay ka kooban tahay mid kasta iyo habka ay u dhexgalaan ka hor intaadan u iibsan isugeynta.
Hal shay oo kale oo ay tahay inaad fiiriso waa xaddiga cilmi -baarista lagu sameeyay nootropic. Qaarkood ma haystaan ​​taageerada cilmi -baarista halka qaarna aan laga baarin aadanaha. Xilligan, waxaa jira daawooyin badan oo caqli badan oo cilmi -baaristooda si qumman loo sameeyay.
Markaa ayey nabadgelyo kuu tahay adiga uun inaad doorato shey si qumman loo xaqiijiyey oo loo xaqiijiyey inuu waxtar leeyahay. Tan, waxaad ku hubsaneysaa xoogaa xasillooni ah oo maskaxda ah iyo sidoo kale inaad ka fogaato khasaaraha lacagta adigoo qaadanaya waxyaabo dhib kuu geysan kara ama xitaa aan shaqeyn karin.
Lots ayaa laga sheegay badeecad kasta oo ay adeegsadaan kuwii horay u isticmaali jiray. Macluumaadka noocan oo kale ah waa inay kaa caawiyaan inaad sida ugu fiican ula qabsato isla markaana u yareeyso fursadda aad ku iibsaneyso nootropic aan shaqeyn. U tag kuwa leh faallooyinka ugufiican iyo kuwa aan wanaagsanayn.
Guud ahaan, waxaa jira waxyaabo badan oo laga fiirsado ka hor intaadan lacagtaada ku bixin wax nootropic ah. Si aad u hesho waxa ugu fiican, waa inaad ku salaysaa qodobbada la siiyay oo dhan si aad ugu gogol xajiso buundooyinka inta ugu badan haddii aan dhammaantood ahayn.
Faa'iidooyinka isticmaalka nootropics
Maalin kasta, waxaan raadineynaa gees; wax inaga dhigi doona kuwo ka wanaagsan kuwa kale. Miyaad ku fikirtay meel ka baxsan sanduuqa oo aad tixgelisay adeegsiga nootropics waa mid ka mid ah siyaabaha sida habboon u siin kara noloshaada isbeddel?
Adeegsiga nootropics-ka wuxuu la imanayaa dhowr faa'iidooyin, iyo haddii aadan ku soo bandhigin natiijooyin muhiim ah isticmaalka hal nootropic, waxaad isku dari kartaa laba ama in ka badan si aad u aragto natiijooyin dheeraad ah oo aan caadi ahayn.
Hoos waxaa ku qoran qaar ka mid ah faa'iidooyinka nootropic;
Kordhinta u fiirsashadaada
Miyaad heshay naftaada oo ka fikireysa wax kale oo aad xitaa illowday hawshii gacanta ku haysay? Waa iska caadi, laakiin mararka qaarkood waxaad dareemi kartaa inaad dhibaato ku qabtid inaad diirada saarto hal shay waqti ka dib inaad haysato dhowr mashruuc oo aan dhamaanin iyo fikrado kala badh la dubay. Marka maxaad sameyneysaa
Qaadashada nootropics waxay cadeysay inay kaa caawineyso taas iyagoo kaa caawinaya inaad si xoog badan u footo iyo inbadan. Marka xigta, waxaad ku siin kartaa hawl kasta fiiro gaar ah oo ay u qalanto xitaa markay dareento inaad maskaxdaada wax badan ku soo martay.
Laga yaabee inaad akhrisatay mowduuc gaar ah, aad u fahantay aadna u illowday wax kasta xitaa maalinta imtixaanka ka hor. Taasi waa inaysan mar dambe dhibaato kuu keenin; qaadashada nootropics waxay cadeysay inay waxtar u leedahay xusuusta aadanaha.
Waxay ku wanaajisaa xusuusta qofka iyadoo la adeegsanayo wanaajinta iyo hagaajinta dhammaan qaybaha xusuusta qofka isla markaana dib loo xusuusto. Nootropics sidoo kale waxay taageertaa horumarinta unugyada maskaxda waxayna xoojisaa isku xirnaanta neerfayaasha. Iyada oo loo marayo isku xirnaanta la wanaajiyey, fahamka, iyo soo celinta macluumaadka macluumaadka ayaa la xoojiyaa.
Hagaaji caafimaadka maskaxdaada guud
Maskaxdu waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan jirka. Waxqabadkeeda, si kastaba ha ahaatee, waxaa saameeya cunto xumo iyo jadwalka mashquulka ah. Iyadoo la adeegsanayo nootropics, ma aha oo kaliya inaad kor u qaaddo xusuustaada, laakiin caafimaadka guud ee maskaxda ayaa sidoo kale soo hagaagaya.
Taasi waxaa lagu gaadhaa iyada oo la kordhiyo socodka oksijiinka maskaxda iyo dayactirka unugyada maskaxda iyo unugyada maskaxda, taas oo maskaxda ka dhigaysa mid wax ku ool ah.
Niyad xumadu waxay burburin kartaa maalintaada oo waxay kaa dhigi kartaa inaadan u qaban hawlahaaga sidii la rabay. Nasiib wanaag, waxaa jira alaab la heli karo oo wanaajin karta niyaddaada, taasoo kaa dhigaysa qof faraxsan. Nootropics ayaa kuu keeni kara inaad taas diiradda saarto oo aad xoogga saarto hawlaha laga yaabo inaad qabato.
Wood S, Sage JR, Anagnostaras SG (2014). “Cilmi-nafsiga iyo garashada: Farmacol. Rev. 66 (1): 193–221.
Frati P, Kyriakou C, Marinelli E, Vergallo GM, Zaami S, Busardò FP (2015). “Daawooyinka casriga ah ee garashada iyo kor u qaadista jirka :. Curr Neuropharmacol. 13 (1): 5-11.
Giurgea, Corneliu, (JanuarY, 1977). "Dawooyinka Nootropic". Horumarka Neuro-Psychopharmacology. 1: 235–247
1.Fahmitaanka noocyada kala duwan ee nootropics
2. Isbarbar dhig 15 ugu fiican budada ah budada nootropic ee 2019
3.Best budada nootropic ugu fiican
4.Bootropic ugufiican hagaajinta xusuusta
5.Nootropic ugu fiican ee waxqabadka cayaaraha
6.Beetropic ugu fiican ee soo jeedka
7. Kordhiye Sirdoonka ugu fiican
8. Dhiirrigeliyaha ugu fiican
9.Beotropic dhaq-dhaqaaqa fiican
10.Nootropic ugu fiican ee neuroprotection
12.Beetropic-ka ugu fiican ee lagu daaweeyo cudurka Alzheimers
13.Notropic ka hortagga ugu fiican
14.Beotropic ugu fiican ee kor u qaadista shaqada wadnaha
15.Nootropic ugu fiican daaweynta sonkorowga
16.Byootropic ugu fiican la dagaallanka kansarka xubinta taranka dumarka
17. kobcinta glutathione ugu fiican
18.Maxaa laga fiirsadaa kahor iibsiga nootropics
19.Faa'iidooyinka isticmaalka nootropics
Iibso Fulkazil khadka tooska ah wuxuu leeyahay,
January 20, 2021 at 10: am 19
Waxaa ku daalay nootropic stack
Qaaday xaddiga 600mg adrafinil, 1500 oxiracetam, 1500 aniracetam (750 jeer laba jeer maalintii) iyo kuwa kale sida d3 iyo vitamin B maalin kasta Iyo Alpha gpc usbuucii la soo dhaafay, waxaad dareemeysaa daal waxayna leeyihiin baco madow indhahayga hoostooda marwalba, sida caadiga ah qof aan aad u niyad jecleyn oo u maleynayay inay taasi wax ka tari doonto sida caadiga ah waxaan dareemayaa daal kasta, si kastaba ha noqotee, Stack wuxuu shaqeeyay dhowr maalmood laakiin hadda waxay dareemeysaa inaan kaliya qaban karin wax shaqo ah aniga oo aan dareemin diiqad iyo daal, talo kasta?
JJBrav wuxuu leeyahay,
January 21, 2021 at 4: am 13
Taasi waa xargo adag. Isku day inaadan inta badan qaadan? Iskuday oo keliya inaad isticmaashid toddobaadkii laba jeer, oo aad baaskiil ku wadatid xirmooyin kale oo isticmaala nidaam beddelan Tusaale ahaan, waxaan ku kala beddelaa inta u dhaxeysa xarigga 'phenylpiracetam / choline stack' iyo kafeyn / theanine / uridine stack. Mararka qaarkood waxaan ku dari doonaa mid ka mid ah acetyl-l-carnitine.